के खेलाडी चैंपियनले महान्लाई बोलाइन्छ?
खेलाडी च्याम्पियनसिपले हरेक वर्ष टीपीसी सवाग्रासमा आफ्नो प्रसिद्ध टापु-हरियो नम्बर 17 मा खेलेका छन्, केही गोल्फको "अनौपचारिक पाँच प्रमुख" भनिन्छ।
तर त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जसले विश्वास गर्छन् कि खेलाडी च्याम्पियनशिपलाई आधिकारिक रूपमा पाँचौं प्रमुख रूपमा मान्यता दिनुपर्छ, द मेस्टर्स , यूएस ओपन , ब्रिटिश ओपन र पीजीए च्याम्पियनसिपमा प्रमुख च्याम्पियनशिपको रूपमा लिइन्छ।
फिल फिलिक्सनले 2005 मा भने, "हामी स्पष्ट रूपमा महाकालीहरूमा बलियो खेतहरू छन्, तर खेलाडीका लागि खेलाडीहरू, यो सबै वर्ष हो, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पर्स छ र हामी गोल्फको सबैभन्दा कठिन परीक्षण मध्ये एक छ। "
अरूले असहमत गर्छन्। 2003 मा एनीनी एल्सले यसो भने: "चार जना साथीहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्। स्पष्टतः खेलाडी च्याम्पियनशिप हाम्रो च्याम्पियनशिप हो। टूर यो दौडन्छ ... ... तर यो प्रमुख होइन। कहिल्यै पनि हुनेछैन।"
पीजीए टूरको हरेक सदस्यले सहमति जनाएको छ कि खेलाडी चैंपियन च्याम्पियन च्याम्पियन च्याम्पियन च्याम्पियन च्याम्पियनसिप हो। र पीजीए टूर आफैले केही समयका लागि विचार धक्का दिएका छन् कि खेलाडी च्याम्पियनले प्रमुख स्थितिको योग्यता पाएका छन्।
के यस टूर्नामेंटको महत्त्वको बिन्दुमा उठेको छ किनकि यो मुख्य प्रमुखको रुपमा चिनिन्छ? गरौं एक नजिकको नजर।
साताका लागि, पीजीए टूरले पाँचौं प्रमुखको रूपमा खेलाडी च्याम्पियनशिपको विचार धक्का गर्न बयान गर्दै। केही मानिसहरू पनि भन्न चाहन्थे कि खेलाडी च्याम्पियनले पीजीए च्याम्पियनशिपलाई एक प्रमुख रूपमा बदलेका छन् (यद्यपि त्यो प्रकारका कुराहरू यी दिनहरू खोज्न गाह्रो छ)।
टोरर च्याम्पियनको लागि टूर र यसको सदस्य (गोल्फहरू) यति प्रतिबद्ध छन् किनभने यो उनीहरूको टूर्नामेंट हो।
यूएसएजीले यूएस ओपन चलाउछ; आर एन्ड ए ब्रिटिश ओपन चलाउँछ; अमेरिका को पीजीए पीजीए चैंपियन चलाउछ; अगस्टाना नेशनल मास्टर्स चलािन्छ।
तर पीजीए टुरले खेलाडी च्याम्पियनशिप चलाउँछ। "यो हाम्रो टूर्नामेंट हो," तपाईंले पीजीए टूर खेलाडीहरू सुन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ।
खेलाडी चैंपियन च्याम्पियनसिप 1974 मा (जैक निकलॉस पहिलोपटक जिते), जब यो टूर्नामेंट प्लेयर च्याम्पियनशिपको रूपमा चिनिन्थ्यो, पीजीए टुर अमेरिकाको पीजीएबाट तोडिदै थिए।
अमेरिकाको पीजीएले सधैँ पेशेवर भ्रमण कार्यक्रम चलाएको थियो। तर समयको साथ, भ्रमण खेलाडीले पीजीएको अधिक ध्यान (र अधिक पैसा र राम्रो परिस्थिति) को अधिक माग गर्यो। पीजीएले "टूर्नामेंट प्लेयर डिभिजन" सिर्जना गरेका थिए। यसले केही समयको लागि काम गर्यो, तर त्यसपछि 1970 को दशकमा भ्रमण भ्रमणका क्रममा अन्ततः पीजीए टूर संगठन गठन गरी पूर्णतया भागे।
र जब पीजीए टूर अमेरिका को पीजीए देखि एक अलग संगठन को रूप मा गठित भयो, पीजीए टूर ने आफ्नो टूर्नामेंट - प्लेर्स च्याम्पियनशिप शुरू गर्यो। यो महत्त्वपूर्ण यात्राको बारेमा विचार गर्नको लागि प्रविधि भ्रमण गर्नको लागी प्राकृतिक थियो। र गोल्फका अन्य शासकीय निकायहरू (अस्टा प्लस) सँगै आफ्नै साथीहरूलाई ठिक पार्दै, पीजीए टूर एक पनि, पनि चाहनुहुन्छ।
समर्थकहरूले के भन्न सक्छन्
जो विश्वास गर्छन् खेलाडी च्याम्पियनशिपले प्रमुख च्याम्पियनशिप स्थितिको योग्यता निम्न अंकहरू बनाउँछ:
• यो केवल एक प्रमुख विचार गर्नु पर्छ किनकी यो, प्रशंसा द्वारा, एक टूर्नामेंट को रूप मा महत्त्वपूर्ण छ।
• पीजीए टुर द्वारा आयोजित सबै भन्दा ठूलो घटना हो। एक प्रमुख रूपमा, यो USGA, आर एन्ड ए, अमेरिका को पीजीए र अगस्टाना नेशनल द्वारा बनाईएको प्रमुखहरु मा शामिल हुनेछ।
• पीजीए भ्रमण यो "आफ्नै" प्रमुख हुनुको योग्य छ।
• खेलाडी च्याम्पियनशिप सामान्यतया वर्षको समयमा खेल्ने कुनै टूर्नामेंटको सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र हो, र यसले खेलाडीलाई कुनै पनि टूर्नामेंटको सबैभन्दा ठूलो पर्स प्रदान गर्दछ। सबैभन्दा धेरै पैसाको लागि सबैभन्दा राम्रो खेल्ने खेल प्रमुख च्याम्पियनशिपको बराबर हुन्छ।
• च्याम्पियन्स टूर र एलपीजीए टुरका प्रमुखहरूका संख्या र पहिचानले वर्षौंको अवधिमा परिवर्तन गरेको छ, र ती ट्राफिकले परिवर्तनलाई अझ राम्रो बनायो। पीजीए टूरमा पाँचौं प्रमुख थपेमा कुनै पनि चीज छैन।
• खेलाडी च्याम्पियनशिपले आधिकारिक स्थितिलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्दछन् किनकी धेरै खेलाडीहरू, प्रशंसकहरू र मिडियाहरूले यसलाई ठूलो रूपमा व्यवहार गर्छन्।
डिस्पेक्टरहरू के भन्नुहुन्छ
जो आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विचार को विरोध को रूप मा खेलाडी चैंपियनशिप एक प्रमुख को रूप मा निम्न बिंदुहरु:
• गोल्फ परम्पराहरु को एक खेल हो, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण परंपराहरु मध्ये एक छ चार महाविद्यालयहरु, पांच नहीं छ।
• प्रत्येक टूर्नामेंटलाई प्रमुख भनिन्छ। केवल किनभने किनभने4जना साथीहरू मतलब छैन कि पाँचौं उत्कृष्ट टूर्नामेंट - चार जना साथीहरूको बाहिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टूर्नामेंट - कोटीमा फ्याँकिएको छ।
• यदि खेलाडी च्याम्पियनसिपमा पाँचौं प्रमुख हुन्छ भने कतिपटक टूर्नामेंट सुरु हुने छ भने यो कति छ महिना अगाडि छ? यदि त्यहाँ पाँच जना साथी हुन सक्छन्, त्यसोभए छ किन? वा सात वा आठ?
पाँचौं प्रमुखलाई जोड्दा सबै ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू हटाउने गरी फ्याँकिएको छ, जस्तै प्रमुख च्याम्पियनशिपहरू जित्छन् , र आज कसरी र कलका खेलाडीहरू न्याय गरिन्छ भनेर परिवर्तन गर्दछ।
• यदि खेलाडी च्याम्पियनसिप प्रमुख हो भने अघिल्लो चैंपियनहरू कसरी निस्केका छन्? के 1979वा 1983 देखि विजेता अब एक प्रमुख चैंपियन मानिन्छ? अथवा यो घटनाको मात्र विजेताहरूले प्रमुखको रूपमा "आधिकारिक" स्थिति प्राप्त गरे पछि?
• पाँचौं प्रमुख घोषणा गर्नाले केवल कीड़ेको धेरै भन्दा धेरै डिसेन्स खोल्छ, विच्छेदकर्ताहरूले भन्छन्, र गोल्फको समय-समय परम्पराहरू संग चम्किलो हुन्छ।
यो कहाँ रहन्छ
साताका लागि, गति एक प्रमुख बनने दिशा मा खेलाडी च्याम्पियनशिप धक्का लग रहेको छ। पीजीए टूरको प्रसारण साझेदारहरूले कार्यक्रममा अधिक वायुमेटिलाई समर्पण गरे र खेलाडीहरूको लागि तिनीहरू "एक्स्ट्रा" (जस्तै साइट-स्टुडियो शो) गर्छन जब तिनीहरू चार जना साथीहरूका लागि गर्छन्। धेरै पीजीए टूर सदस्यहरूले घटनाको महत्व बोल्छन्। टूर आफैले सधैं विचार (कहिलेकाहीं उपेक्षा गर्छ) धक्का दिन्छ कि खेलाडीहरू प्रमुख स्थितिको योग्य छन्।
सन् 2000 को दशकको दशकमा 2010 मा पछाडि गति पछाडि साढे जस्तो देखिन्छ। 2011 मा, ली वेस्टवुड - त्यसपछि विश्वमा नम्बर 1 स्थान र खेलाडीहरूलाई छोडियो। त्यसोभए शीर्ष 10 खेलाडी रोरी मैकइलोरो सोसाइटी। वेस्टवुड र म्याकइलेरोले समयमा पीजीए टूर सदस्यहरू थिएनन् र उनीहरूले स्पष्ट रूपमा एक बयान गर्दै थिए कि उनीहरूको सीमित पीजीए ट्रायर प्लेिङ विकल्पहरू छन्, उनीहरूले स्वचालित रूपमा खेलाडीहरूलाई उनीहरूले प्रायः खेल्न चाहने एक कार्यक्रमको रूपमा चयन गरेनन्।
तर एक 2014 टूर्नामेंट भन्दा पहिले टूर परिवर्तनले भ्रमणले खेलाडीहरूलाई अग्रिम अग्रिम विचार पुर्याउँछ भनेर देखाउँछ: उनीहरूले अचानक मृत्यु प्लेफोन ढाँचाबाट 3-छेद, संचयी अंक ढाँचामा स्विच गरे । यो एक धेरै प्रमुख कुरा गर्न को लागी कुरा हो।
मलाई विश्वास छ कि "प्रश्न" को प्रश्न होइन, तर "जब" खेलाडी च्याम्पियनशिपको अन्तमा प्रमुख भनिन्छ।
1961 राइडर कप: ढाँचामा परिवर्तनहरू, तर अर्को संयुक्त राज्य अमेरिका विन
युएस ओपनको प्रायः गोल्फ कोर्सहरू
सबैभन्दा परास्नातक टूर्नामेंट सुरु हुन्छ
2018 परास्नातक टूर्नामेंट: रीड होल्ड अप चैलेंजर्स
महिला ओस्ट्रेलियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट
गोल्फको सिमित्रा टूरको बारेमा तपाईंलाई थाहा छ
1965 पीजीए च्याम्पियनशिप: मिर स्टिभ्स अफ निकलाउज, कास्पर
2009प्रिन्सिसर्स कप
2016 ब्रिटिश ओपन: रेकर्ड ब्रेक विन Stenson द्वारा
परास्नातक टूर्नामेंट को मूल नाम के थियो?
पीजीए टूर को ज्यूरिख क्लासिक 2017 मा टीम प्रारूप मा जाँदैछ
यहूदी धर्ममा विलाप गर्ने प्रक्रिया
लिचटेनबर्ग चित्र कसरी बनाउने
हेक्टर लाभो - सर्वश्रेष्ठ गीत
इलेक्ट्रिक बसहरू - एक परिचय
"पुष्टिकरण:" एचबीओले अनीता हिलको कथालाई टेलिभिजन गर्दछ
इतिहास को सोनार
Elmira College Admissions
शिक्षकहरूको लागि मिन्चुलर व्यायाम व्यायाम
यूएससीआई र लाभकारी समाजहरुको लागि तपाईं को लागि
स्टार वार 'पदम अमेडालाको प्रोफाइल
मेरी, रानी स्कट्स, तस्वीरहरु मा
अमेरिकी इतिहासमा 10 महत्त्वपूर्ण कालो आविष्कारकहरू
नदीहरू उडिरहेको उत्तर
Camilo Cienfuegos को जीवनी
बेस ड्रमको बारेमा
10 आवश्यक रेगा क्लासिक्स
माइन जीपीए विश्वविद्यालय, एसट र एक्ट डेटा
पिंग G25 वुड्स र इरन्स
6 तरिका रिपोर्टकर्ताहरूले चासोको विवादबाट बच्न सक्छन्
बिग ब्रेक डोमिनिकन गणतन्त्र
केक्स रोमनको समयमा जीवन के थियो?
कसरी पेंट प्यालेट राख्नु
इंद्रको ज्वेल नेट
एक शैक्षणिक कक्षाको वातावरण सिर्जना गर्दै